May 2020 - RealThadin
May 31, 2020 RealThadin 0
ယခု သတငျးကို ( Ye Linn Kyaw ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ စတေနာကို စျောကားသှားသူမြား Qurentine ၀ငျတဲ့သူတှကေို အား/ကာ သိပ်ပံ(မန်တလေး) ကြောငျး အမြိုးသား အိပျဆောငျတှမှောထားတယျ။ တဈဆောငျခငျြးစီက အိပျဆောငျမှုး(နညျးပွ)၊ […]
May 30, 2020 RealThadin 0
ဇှနျလ ၁ ရကျတှငျ ပွုလုပျမညျ့ (၁၆)ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ ထီဖှငျ့ပှဲတှငျ ယခငျလကထကျ ဆုငှနှေဈဆ ကြျော တိုးမွှငျ့ခြီးမွှငျ့မညျဟု အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာနကထုတျပွနျသညျ။ အောငျဘာလသေိနျးဆုဌာန သညျ ဧပွီက ထီလကျကနျြစံခြိနျ တငျမြားခဲ့၍ ဆုငှကေပျြသနျး ၇,၇၀၀ ကြျောသာ ခြီးမွှငျ့နိုငျခဲ့ပွီး မလေအတှကျ ပွုလုပျမညျ့ (၁၆) ကွိမျမွောကျထီဖှငျ့ပှဲ၌ […]
ရွှေစက်တော် ဘေးမဲ့တော ဧရိယာအတွင်းမှ ရွှေသမင် ကျော့ကွင်းပေါင်း (၁၇၀) ကျော် သိမ်းဆည်ရမိ… မင်းဘူးခရိုင် ၊ ရွှေစက်တော်ဘေးမဲ့တောဧရိယာ ဧကပေါင်းတစ်သိန်းကျော်အတွင်း၌ ရွှေသမင်များ အဓိက ကျက်စားသည့် ဧက ၄၀၀ ကျော်ရှိပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပြီလ နှင့် မေလများအတွင်း သမင် နှင့် […]
May 27, 2020 RealThadin 0
ယခု သတငျးကို ( SiThuMaung ) စာမကျြနှာ မှ တဈဆငျ့ ပွနျလညျ မြှဝေ တငျဆကျခွငျး ဖွဈပါသညျ ကွံကွံဖနျဖနျ မိနျးကလေး ဖိနပျမြိုးစုံကို လိုကျလံခိုးယူကာ ဖကျအိပျပွီး တဈကိုယျရညျ လိငျစိတျဖွသေူကိုရဲတပျဖှဲ့မှဖမျးဆီးရမိခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ ထိုငျးနိုငျးငံ နှနျထဘူရီခရိုငျ ဘနျ့ကလှမွေို့နယျ ဘနျခှနျထောငျးကြေးရှာအုပျစု ၊ […]
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား နောက်တစ်ဆူ တွေ့ရှိ ဖူးမြော်ပြီး လိုရာဆုတောင်းပါ
May 25, 2020 RealThadin 0
ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား နောက်တစ်ဆူ တွေ့ရှိ မွန်ပြည်နယ်၊ပေါင်မြို့နယ် ဆင်အိုင်တောင်အတွင်းမှ ကျိုက်ထီးရိုးပုံစံတူ စေတီတော် တစ်ဆူကို တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းဆရာတော်အရှင် စန္ဒိမာက မြွတ်ကြားသည်။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရား နောက်တစ်ဆူ တွေ့ရှိ ဦးဇင်ုးခ တော ထဲ ရောက်တာ ၉ ရက်ရှိပြီးရွက်ဖျင်းတဲ လေးနဲ့ပဲသီတင်းသုံး နေတာ၊အဲ စေတီ တော်လေးကိုအရင်တုန်းက တော့ထင်းခုတ်တဲ့ […]
နေ့စဉ်၁၀မိနစ်ခန့် ဘုရားရှစ်ခိုးတဲ့ ခွေးကလေး သာဓုပါ ကံ​ကောင်း​လေး​ရေ ဒီဘဝ တရိစ္ဆာန် ​နောက်ဆုံးဖြစ်ပါ​စေ
May 24, 2020 RealThadin 0
နေ့စဉ်၁၀မိနစ်ခန့် ဘုရာ; ရှစ်ခိုးတဲ့ ခွေးကလေး(သာဓုပါ ကံ​ကောင်း​လေး​ရေ ဒီဘဝ တရိစ္ဆာန် ​နောက်ဆုံးဖြစ်ပါ​စေ) ချင်းလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဦးထျန်ဖရဲ့ ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ခွေးလေး… ခွေးလေးရဲ့နာမည်က Bu(ကံကောင်း)တဲ့… နေ့တိုင်းဘုရားစင်ရှေ့မှာ ၁၀မိနစ်လောက် ဦးချနေတက်တယ်တဲ့… ထူးခြားချက်အဖြစ် အဲဒီ Bu လေးမွေးတဲ့ အချိန်ကစပြီး ဦးထျန်ဖတို့ရဲ့စီးပွားရေး အရမ်းတိုးတက်အောင်မြင်တယ်တဲ့… အခုဆိုရင် […]
ဒီပုံလေးကို အမှတ်မထင် ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ထဲက ဒေသတစ်ခုမှာလို့ ထင်မှတ်မှားစရာပါ။နေရာက ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း၊ ချစ်တကောင်းတိုင်းဒေသအတွင်းရှိ ဘန်ဒါဘန်ခရိုင် မှာဖြစ်ပါသတဲ့။ အဆိုပါဒေသရဲ့ မြေပိုင်ရှင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မစ္စတာမာဘူဘာရဲ့ အလှူပွဲတစ်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် တစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါဒေသရှိ မိဘမဲ့ကလေးများဂေဟာတစ်ခုအတွက် မြေနေရာအကျယ်ကြီးတစ်နေရာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းထံပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သလို ပုံပါ […]
ခရစ်ယာန်မှ ဗုဒ္ဓဘာသာကူးပြောင်းလာသော ဦးဇင်းလေး (၂)ပါး . . .
May 22, 2020 RealThadin 0
ဦးဇင်းတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ပါး၏ မူရင်းဘာသာကတော့ ခရစ်ယာန် ပေါ့ ခုတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာပြီး ဗုဒ္ဓ၏အရိပ်အာဝါသအောက်မှာနေလာခဲ့တာ ဆယ်နှစ်ကျော်သွားပြီး. ဗုဒ္ဓ၏တရားတော်ကိုကိုင်းရှိုင်းသူ အဖို့ကတော့ လောကမှာဘာတွေပဲဖြစ်နေဖြစ်နေတုန်လုပ်မှူမရှိတော့ဘူလေ ပြီးတော့ .လူဖြစ်ရတာ ကျေနပ်စရာလေးပေါ့..ဒါနဲ့ ဟင်ဒူ နှင့် ခရစ်ယာန် မှာလည်း ကျမ်းစာဟောထားအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်လည်း လူ့ဘုံနတ်ဘုံလို့ခေါ်တဲ့သုဂတိဘုံရောက်နိုင်တာပဲလေ…ဒါပေမဲ့ ချမ်းသာအစစ်လို့ခေါ်တဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်တော့မရှိဘူးပေါ့ နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာတစ်ခုတည်းသာရှိနိုင်တယ်လေ..တကယ်တော့ […]
ဒေါက်တာ လဲ့လဲ့မော်အား စုစုပေါင်းထောင်ဒဏ် အနှစ်၃၀ချ မှတ် . .
ဒေါကျတာလဲ့လဲ့မျောအား စုစု ပေါငျးထောငျဒဏျအနှဈ၃၀ခြ မှတျပွီး စတုတ်ထအမှုမှ မိသားစုပိုငျသညျ့ သရကျခြောငျးနအေိမျကို ပွညျသူ့ဘဏ်ဍာသိမျးယူ အဂတိလိုကျစားမှုဖွငျ့ တရား စှဲဆိုခွငျးခံခဲ့ရသညျ့တနင်ျသာရီ တိုငျးဒသေကွီး ဝနျကွီးခြုပျဟောငျး ဒေါကျ တာလဲ့လဲ့မျောကို ထောငျဒဏျအနှဈ ၃၀ ခမြှတျလိုကျ ကွောငျး သိရှိရသညျ။ ပထမအမှုမှာ လမျးဦးစီးသို့ဘဏ်ဍာငှေ တဈလုံးတဈခဲတညျးခပြေးမှုနှငျ့ ခွံစညျးရိုးကာရံမှု၊ ဒုတိယအမှုမှာ […]